Esikhathini esithile ngemva isaziso esisemthethweni ukuthi umshado umongameli Russian uye ziwile, manje wangaphambili Vladimira Putina unkosikazi, ULyudmila futhi wanyamalala. Cishe zonke izincwadi njengase noma yini ukuthola ulwazi mayelana nokuthi ULyudmila Putina uhlala. Ngayiphi indlela ikhona, yini? Lemibuzo impendulo ecacile kuze kube manje akakunikanga.
Ngesikhathi esifanayo ziqondiswe izintatheli we-isikhungo press of the umbuzo Administration uMongameli sika, lapho uhlala ULyudmila Putin, abasebenzi bakhe wacela ngesizotha ukuba aphazamise singakunaki ukuphila komuntu umongameli Russian.
abezindaba Foreign kanye Blogger futhi wayefuna ukuthola ukuthi yini ukwenza ngemva kwesehlukaniso nowayengunkosikazi umongameli. Babenezincwadi inguqulo okucacile lapho ULyudmila Putina uhlala manje. izincwadi Foreign libike ukuthi okwamanje uVladimir Putin Owayeyinkosikazi inkosikazi emzini wezindela encane, etholakala eduze Pskov. Le ndawo abe ikhaya elisha ngomfazi uMongameli Russian.
Nokho, ngokuvumelana izintatheli Ukrainian, ikakhulukazi umthombo TSN, uMsindisi Elizarovsky sezindela kuphi futhi ULyudmila Putin uhlala, akubhekwa abode edume kunazo Izigodlo Nokho, endaweni efanele ukuze zithandaze esekusithekeni futhi sivumelanise imicabango yabo ukuze . Lesi sakhiwo yezakhiwo kuye kwafeza indima ebalulekile lonke Lobu-Orthodox LaseRussia, ngoba kulapha lapho wazalwa welithi "eMoscow -. Okwesithathu eRoma"
Okwamanje, bonke izakhiwo Isigodlo, lapho ULyudmila Putina uhlala, yi-kucatshangwa abezindaba Western, kwaba kabusha. Kubuyekeziwe engadini - kwakukhona olunothile izinhlanzi echibini. Ngaphezu kwalokho, esigabeni sokugcina yinqubo ukwakhiwa amahhotela for amaholide kanye nezivakashi.
Nokho, i-ezifana Ludmila Putinoj njengoba ukuzinikela, sabika kokubili abezindaba basekhaya nabamazwe angaphandle.
Okusanda, ulwazi uvele abezindaba ukuthi wayekhathazeka kakhulu weza wasondela ku-abbess we Isigodlo uMsindisi Elizarovskiy. Ezinye mikhondo ngokushesha wakhumbula Eqinisweni njengoba ku-akhawunti ye-sezindela othile kabusha ohlwini ruble ecishe ibe yizinkulungwane 500.
Intatheli wendawo Oleg Dementyev ku umbuzo lapho ULyudmila Putina uhlala manje, waphendula: "Impela kufanele abahloniphe wagomela ukuthi uhlala unaphakade esigodlweni sezindela, kwakungeke kube yiqiniso. It evakashela lapha ngezikhathi ezithile. Nokho, abantu balapha babonisa ukunganeliseki yokuthi Isigodlo yaguqulwa zebandla esebenzisa, okuyiqembu mansions eyakhelwe lechitfwa nguhulumende. "
Ngesikhathi esifanayo, kungakhathaliseki ukuthi bakuphi, intatheli ayizange ukwenaba. Abanye bakholelwa ukuthi yaba umngane yangaphambili umongameli Russian ukuthi bazinza cottage ensimini ka uMsindisi Monastery Elizarovskiy. Abanye, okwembula izimfihlo lapho umkakhe uhlala Putin - ULyudmila, wathi uncamela ukuhlala esithabathabeni sendlu wezinzalamizi, esemgwaqweni ibangana izakhiwo eyinhloko yesigodlo.
Nokho, izakhamuzi zendawo baye babonisa isifiso kancane ukuxoxa imininingwane yokuphila eyimfihlo nowayengunkosikazi uMongameli Russian.
Kuyini lapho sebebuswa inkosi: Esikhathini Esidlule Nanamuhla